Iimveliso ezinceda iimfuno zempilo zabemi. Ngokwe-WHO, ezi mveliso kufuneka zibekho "ngamaxesha onke, kwixabiso elifanelekileyo, kwiifomu zedosi efanelekileyo, kunye nomgangatho oqinisekileyo kunye nolwazi olwaneleyo, ngexabiso umntu kunye noluntu abanakho ukulifumana".
Uhlobo lwe-10mm yase-hose clmp ye-hmm
Imveliso isebenzisa ibhanti yensimbi ngokusebenzisa umngxunya wokwenza umngxunya wayo ukuze ibambe ngokuqinileyo ibhanti yensimbi.
Ukulula ukuyisebenzisa, kunokusikwa nakuphi na ubude.
I-12.7mm iseti yaseMelika
I-hose enkulu ye-hamp clamp band yangaphakathi yomsesane
Ibhendi enkulu yase-hose yokuxinisa yempumlo yangaphakathi inamacandelo amabini aphambili, eyindlela enkulu yaseMelika yephampu yokuhombisa kunye neringi yangaphakathi. Isangqa sangaphakathi esine-corrugated senziwe ngokukodwa ngentsimbi ephezulu ye-gauge engenasici ukuze kuqinisekiswe ukutywinwa okuhle kunye nokuqina.
Iibhampasi ze torque ezihlala zineentlobo ezimbini zeebhendi, eziyi-14.2mm kunye ne-15.8mm, i-14.2mm bandwidth ineeperi ezi-4 zeepads zentwasahlobo, kwaye i-15.8mm bandwidth ineepuzzle ezi-5 zentwasahlobo.
Ukukhutshwa ngokukhawuleza kwekhampasi yase-hose yaseMelika
Ukukhutshwa ngokukhawuleza kwekhampasi ye-hose clamp bandwidth yi-12mm kunye no-18.5mm, ingasetyenziswa kakuhle kwiinkqubo ezivaliweyo ekufuneka zivulelwe ukufakelwa.
I-14.2mm uhlobo lwembiza yaseMelika uhlobo
Le khonkco luhlobo oluphuculweyo lwesitayile esiqhelekileyo saseMelika, esine-bandwidth ye-14.2mm, kwaye amandla ayo aphakamileyo kunaleya yesiqhelo yaseMelika.
I-12,7mm yohlobo lwe-hose ikhampasi yesibambo ngesibambo
I-12.7mm uhlobo lwembiza yaseMelika uhlobo lweshampu yesiphatho iyafana ne-12.7mm yohlobo lwaseMelika hose clamp. Yenziwe ngezinto ezinobunzima obuphezulu, kodwa kukho isibambo esongeziweyo kwisikali. Isibambo sineentlobo ezimbini: Intsimbi kunye neplastikhi.Umbala weebhatyi unokuhanjiswa ngokweemfuno zabathengi.
Uhlobo lwe-hose clamp yaseMelika yohlobo lwe-12,7mm
Le clamp yenziwa ngezinto eziqinileyo ezinzima, inokwenzelwa ngokobukhulu obufunwa ngumthengi. Zimbini iintlobo zesikrelem: eziqhelekileyo kunye nokubuya.
Uhlobo lwe-hmm lwaseMelika oluhlobo lwe-8mm
Ikhampasi encinci yaseMelika ineebhendi enye ye-8mm.Iyeyeshampu yesibane, kufuneka nje i-2.5NM ye-torque enyukayo. Le khonkco inokubonelela ngokusetyenziswa okuthembekileyo nokuhlala ixesha elide, inokubonelela ngoxinzelelo oluphezulu lokutywina. Izikere zinemiphetho emi-6 kunye ne-6.3 emacaleni.
Uhlobo lwaseMelika uhlobo lwesinyanzelo esinyanzeliswayo
Uhlobo lwemveliso yaseMelika enomthwalo osisinyanzelo esine-bandwidth ye-15.8mm kwaye sisakhiwo esinzima esinamanqaku amane esinokuthi sidlulise amandla okuqinisa ngakumbi kwibhanti yentsimbi enemingxunya. Ukongeza kubukhulu betafile, iyakwazi ukwenziwa ngokobukhulu obufunekayo ngumthengi.